» “एमसीसी आँखा,चिम्लेर पास गरे, हुन्छ, एमाले पनि पक्षमै छः विष्णु रिमाल, (भिडियो )” “एमसीसी आँखा,चिम्लेर पास गरे, हुन्छ, एमाले पनि पक्षमै छः विष्णु रिमाल, (भिडियो )” – हाम्रो खबर
“एमसीसी आँखा,चिम्लेर पास गरे, हुन्छ, एमाले पनि पक्षमै छः विष्णु रिमाल, (भिडियो )”
2021, November 8th, Monday
हाम्रो खबर संबाद दाता 137 Views
“काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिमालले विवादित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) आँखा चिम्लेर पास गर्नुपर्ने र नेकपा एमाले पार्टी एमसीसीको बिरुद्धमा नरहको पनि बताएका छन । उनले यो अभिव्यक्ति योहो टिभीको कार्यक्रम सत्य संवादमा पत्रकार जीवराम भण्डरीसंगको अन्तर्वार्तामा दिएका हुन ।”
“उनी भन्छन, यसमा धेरै बहस गर्न आवश्यक छैन, एमसीसी आँखा चिम्लेर पास गरे हुन्छ, यसमा केही संशोधन गर्न आवश्यक छैन वाहिगत कुरा हो । यसमा टिप्पणी गर्नु, एमसीसी जस्तो सम्झौता धेरै गरेका छौं । हामीले चिनसंग पनि त्यस्तै गरेका छौं भारतसंग पनि त्यस्तै गरेका छौं ।”
“बिचैमा पत्रकार जिवराम भण्डारीले पश्र गर्छन, अनि ओली जि को छवि रहदैन भन्छन नि ?आवेसमा आउँदै विष्णु रिमाल भन्छन, यसमा के छवि ? यसमा के राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको कुरा छ भनेको एमसीसीमा ?”
“तपाई कै मिडियामा आएर बोल्नेले के भन्या छन भने, एमसीसी मार्फत अमेरिकन सेना आउँछ, यस्ता वाहिगत कुराको पछि लागेर समय बर्बाद गर्न मिल्छ तपाई हामीले ? बिजुलीको तारबाट झुन्डिएर सेना आउँछ ? नचाहिदो कुरा हो यो ।”
“ए अब एमसीसी पास गरिन्छ/पास गर्ने ? त्यो संसदको कुरो हो । हाम्रो एमाले पार्टी एमसीसीको बिरुद्धमा छैन । किनभने ४,५ वटा सरकार ढाल्यो, एन्टि केपी ओली भएर एमसीसीको बिरोध गर्दा झलनाथ खनाल, भिम रावलहरु फसेको पनि दाबी गरेका छन ।”
“उनले यो अभिव्यक्ति केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाकार हुदाँ बैशाख १५ गते दिएका हुन । उनले दिएको यो अभिव्यक्ति अहिले सामाजिक संञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । तर अहिले सत्ता च्यूत भएपछि ओली निकट व्यक्तिहरु एमसीसी राष्ट्रघाति भएकोले कुनै हालतमा पास गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन ।”